Izakhi Eziyinhloko ezi-3 Eziphezulu Zokukhunjulwa Nge-B2B Blogging | Martech Zone
Izakhi Eziyinhloko ezi-3 Eziphezulu Zokukhunjulwa Nge-B2B Blogging
NgoLwesithathu, Septemba 19, 2007 NgeSonto, ngoJulayi 7, i-2013 Douglas Karr
Ekulungiseleleni i- Ukumaketha Profs Business to Business Conference eChicago, nginqume ukunciphisa amaslayidi wami wesethulo abe ubuncane obungenalutho. Izethulo ezinamathani wamaphoyinti ezinhlamvu yilezi IMHO, ezesabekayo nezivakashi akuvamile zikhumbule noma yiluphi ulwazi olwethulwe.
Esikhundleni salokho, ngifuna ukukhetha amagama amathathu okufanele anamathele emakhanda abakhangisi uma kuziwa B2B ukubhuloga. Futhi, ngifuna ukufaka ukubonwa okuqinile ukuze abantu bakhumbule umlayezo.
Ngakhetha isithombe se Seth Godin. Abantu bayamhlonipha uSeth ngoba ungumholi ocabangayo ezimbonini zezokukhangisa nezokukhangisa. USeth ubhukuda ngokumelene nesikhathi samanje futhi unesipho sokukhomba ngokusobala ukwehluleka kwesimo se-quo. Usenza sicabange. Wonke umuntu uthokozela umholi wokucabanga futhi nokwaziwa njengoyedwa kuvelele ebhizinisini lakho. Ibhulogi iyindlela efanelekile yokwaziwa njengomholi wokucabanga.
Abantu abakuthandi ukufunda amagama ekhasini, bathanda ukuzwa izwi lomuntu. Case iphuzu, lokhu okubonwayo okuncane kwe- UJonathan Schwartz, I-Blogger ne-CEO yeSun Microsystems vs. USamuel J. Palmisano, Usihlalo weBhodi, i-IBM - ebheka inani lamakhasi ezixhumanisi eziya kumasayithi abo.
Empeleni bengingazi ukuthi ngubani uSihlalo weBhodi le-IBM ngenkathi ngiphenya ngalokhu.
Igama lokugcina wukwesaba. Yilokho okuvimba amabhizinisi amaningi ekutholeni ibhulogi futhi asebenze. Ukwesaba ukulahlekelwa wuphawu lomkhiqizo, ukwesaba ukuphawula okungalungile, ukwesaba abantu ukukhomba iminwe yabo nokuhleka, ukwesaba ukukhuluma iqiniso. Ezinye zezibalo zikhomba ukuthi ukwesaba kulonakalisa kanjani ikhono lemikhiqizo ethile yokuheha ukufundwa nokunakwa. Ezinye zezibalo zikhomba izinkampani ezinqobe ukwesaba kwazo futhi zikubeka konke lapho ukuze abantu bagaye… futhi bayawina ngenxa yalokho.
Ukwesaba akukaze kube isu. Omunye wake wangitshela ukuthi awusoze wagijima ngejubane uma uhlala ubheka emuva kwakho. Izinkampani eziningi kakhulu aziphephile futhi zesaba okungaziwa. Okuxakayo ukuthi ukwesaba kwabo okukhulu kungenzeka kugcwaliseke ngoba abakunqobanga.
Tags: b2b ukubhuloga
IVerizon Yenze Okuhle Namuhla! I-AT & T Ayihle Kangako…
Siyakuhalalisela uJim Cota neThimba kwaRareBird!
Sep 20, 2007 ku-12: 43 AM
Zonke izinto ezintathu ozibalile beziyizihloko zengxoxo enkampanini yami. Into ehlekisayo ukuthi iphuzu 1 no-2 izingxoxo ezilula. Wonke umuntu uvame ukuba ekhasini elilodwa futhi ubamukela njengeqiniso. Iphoyinti lesi-3, noma kunjalo, kube yinkinga yokuphinda yenziwe kabusha isikhathi eside. Abantu kubonakala sengathi bayayithola noma abayitholi. Angikwazi ukukutshela ukuthi kukhulunywa kangaki ngendaba yamazwana amabi njengesizathu sokungenzi uhlobo oluthile lokuxhumana. Ize yafika ngisho nasekwesabeni ukuthi umuntu esincintisana naye angasilimaza ngokuthumela amanga * ukububula *. Umzabalazo uyaqhubeka.
Sep 20, 2007 ku-7: 23 AM
Izindaba ezimnandi ukuthi awukho umthetho obekiwe wokuqapha imibono kubhulogi lebhizinisi le-b2b. Kulula njengokumisa 'umthetho omuhle' lapho wonke amazwana enziwe futhi kusho ukuthi imibono ayinakwa noma iphendulwa yona uqobo. Nginamazwana angaphezu kwe-3,000 kubhulogi yami futhi bekufanele ngibhalele abantu abangu-2 kuphela ngibatshele ukuthi angizothumela ukuphawula kwabo.
Vele uqiniseke ukuthi wazisa abantu ngaphambili - lena ibhulogi yebhizinisi yokuvula ukuxhumana namakhasimende akho futhi uthole izixazululo - hhayi isithangami esivulekile sokushaya inkampani. Futhi, uma la kungamakhasimende acasukile, ithuba lokuzibhalela uqobo futhi ubasize baveze lingawajika!
Ukulinganisela kuyisici esihle cishe kuwo wonke amapulatifomu wokubhuloga. Ngebhulogi ye-B2B, ngingaqinisa kuyo!
Okuxakayo ukuthi udaba ngokunganaki ebhizinisini ukuthi abantu ababoni amabhizinisi 'njengabantu'. Kuyaqabukela ukuthi umuntu akhulume nomuntu ngendlela abazobhala ngayo ibhizinisi. Ngikhuluma ngokuhlangenwe nakho… Ngizogxeka ibhizinisi uma ngigcwalisa ifomu labo elithi 'xhumana nathi', kepha uma ngithola ucingo ngiyazi ukuthi imvamisa akulona iphutha lalowo muntu ngakolunye uhlangothi bese ngiyalikhuluma .
Ukuba nebhulogi kunikeza amakhasimende umuntu azobona futhi azi - kunciphisa ubungozi bawo ukuqala impi online.
Sep 20, 2007 ngo-1: 33 PM
Ngiyabonga ngempendulo. Uletha iphuzu elihle. Ngijwayele ukubhalisela isikole "samazwana angahlolwanga" ezinkundleni zokuxhumana. Ngizwa nje ukuthi kunikeza umqondo othile wokunika amandla umfundi / umthengi wocezu lwezindaba. Lokhu, ngokungangabazeki, kunomthelela kolunye uvalo ngaphakathi kwenkampani yami. Mhlawumbe kufanele ngithambise indlela yami kancane.